शिक्षा अभियन्ता उत्तम सन्जेलले चप्पल लगाएरै बिहे गरे, जम्मा खर्च ३००| Nepal Pati
काठमाडौँ । शिक्षा अभियन्ता उत्तम सञ्जेलले ३०० रुपैयाँमा आफ्नो बिहे सकाएका छन् । ४१ वर्षको उमेरमा उत्तमले गुहेश्वरी मन्दिरमा अत्यन्त साधारण तरिकाले सोमबार बिहे गरेका हुन् । बेहुली सुन्दरीजलकी कला अधिकारीले रातो कुर्ता सुरुवालमा घुम्टो ओढेकी थिइन् ।
करिब ५ मिनेटमा बिहे सकिएको थियो । विवाहमा कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यले लड्डु उपलब्ध गराएका थिए । जन्तीको रुपमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, उपेन्द्र महतो, गुणराज लुईंटेल, प्रतीक प्रधान, मनोज गजुरेल, सिताराम कट्टेल उपस्थित थिए ।
पण्डित नबोलाई गरिएको बिहेमा आफ्नो जम्मा तीन सय रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उत्तमले बताए ।
विवाहमा भएको खर्च
सिन्दुर – रु. २५ /– मात्र
पोते – रु. ७५ /– मात्र
माला (२)– रु. २००/– मात्र
जम्मा खर्च– जाबो रु. ३००/– मात्र
परिवारका मान्छेहरु बोलाउँदा लेनदेनको कुरोपनि आउने भएकाले आपसी सहमतीमा वैवाहिक समारोहमा सहभागी नगराईएको बताइएको छ । दुलही पक्षले विवाहमा गर्न चाहेको खर्चलाई समता अस्पतालमा उपचार गरि औषधी समेत किन्न नसक्नेहरुलाई सहयोग गर्ने, दाईजोको रुपमा सिङ्गै छोरी नै पाएको हुनाले दुलाहा पक्षले ससुराली पक्षलाई आभार ब्यक्त गर्दै दाईजोको बिकृतिलाई ब्यवहारबाटै बिरोध गर्ने सन्जेलले बताए ।
बिहेको भिडियो हेर्नुहोस्